आफैं अभिनय गरेर अरुलाई अन्याय गरेजस्तो पनि लाग्छ – Khabar Silo
नेपाली चलचित्र उद्योगमा संकटकाल लगाउने तयारी भइरहेका बेला सेन्सरबोर्डले संकटकाल अगाडिको अन्तिम चलचित्र भनेर ०६० को दशकको अन्तिममा एउटा चलचित्र सेन्सर गर्यो । निर्देशक थिए नयाँ । विषय थियो नयाँ, कलाकार थिए नयाँ अनि थियो नयाँ प्रस्तुति । अर्थात् चलचित्रभन्ने शैली नयाँ । ती निर्देशक थिए निश्चल बस्नेत अनि चलचित्र थियो ‘लुट’ । अन्ततः चलचित्रले लाग्न लागेको चलचित्र उद्योगको संकटकाल टारिदयो । चलचित्र हिट भयो। कलाकार मात्रै होइन, पहिलोपटक निर्देशक पनि सेलिब्रिटी बने । त्यसपछि उनले ल्याए ‘टलकजङ्ग भर्सेस टुल्के’ । त्यो पनि फरक कथा बोकेर आएको थियो ।
तत्कालीन माओवालदी जनयुद्धको कथा मुख्य कथानक थियो। त्यसपछि निश्चल लिएर आए, ‘लुट’को सिक्वेल । त्यस यता उनले कुनै पनि चलचित्र निर्देशन गरेका छैनन् । हल्ला चल्छ,उनी निर्देशनको तयारीमा छन् । तर अन्ततः फेरि उनी पछि हट्छन् । निर्देशकका रुपमा निश्चल देखा नपरे पनि उनी अभिनेताका रुपमा भने बाक्लै देखिँदै आएका छन् । केही समय पहिला ‘प्रसाद’मा देखिएका उनी त्यसअघि ‘दुई रुपैयाँ’मा मुख्य भूमिकामा थिए । अहिले उनै निश्चल मुख्य अभिनयमा रहेको चलचित्र ‘घामण शेरे’ यही कात्तिक ८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । उनै निश्चल बस्नेतसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीको अंशः
तपाईंको निर्देशनमा नयाँ चलचित्र र मेलम्चीको पानी काठमाडौंआउने कुरा त उस्तै उस्तै भयो त ।
हा…हा…हा…. मेलम्चीको पानीमा चाहिँ धेरै राजनीति भयो भन्ने सुनिन्छ । तर मेरो चलचित्रमा त्यस्तो राजनीति छैन । हा…हा…हा…. ! म आफैँ नै तयार छैन । मैले जे चिज ल्याउन खोजेको छु त्यो सोचे अनुसारको भैरहेको छैन । मैले आफैँ लेख्न थालेको कथा आफैँलाई चित्त नबुझेर त्यो आइडिया मैले बुद्धिसागर दाइलाई दिएको छु ।
राइटिङ नै राम्रो नभएसम्म राम्रो चलचित्र बन्दैन भन्ने बुझाइ छ । त्यही भएर दाइबाट आइसकेपछि काम सुरु गर्छु । बुद्धि दाइ स्वयम् साहित्यकार त्यसमा पनि फिल्म पारखी । मैले खोजेको चिज उहाँबाट आउँछ भनेर कुरा गर्दा आइडियामा कुरा नगरौं फिलोसफीमा कुरा गरौं। फिल्मको फिलोसफीमा गएर हामी कमै चलचित्र बनाउँछौं । फिलोसफी निस्कियो भने त्यसभित्र रहेर जस्तो कथा ढालेपनि भयो । उहाँ विस्तारो लेखिरहनु भएको छ । आफूले लेख्न थालेको आधा लेखिसकेपछि मलाई नै कस्तोकस्तो लाग्यो, ठिक पनि गइरहेको छ, बेठिक पनि गइरहेको छ भन्ने लागेर उहाँलाई दिएको हुँ ।
राम्रो चलचित्रका लागि कथा भेटिँदैन कि सोचे जस्तो स्क्रिप्ट अभाव हो ?
कथा त यति धेरै छन् । हामीले छुन नसकेको कथा कति छन् कति । तपाईं र म कुरा गर्दागर्दै पनि, म घरबाट यहाँ आइपुग्दा पनि कथा भेटिन्छ । भन्न सक्ने, स्क्रिनप्ले लेख्न सक्ने, पटकथा लेखकको कमी छ । बुलन्द कथा लेख्न सक्ने व्यक्तिको कमी छ । हाम्रो फिल्म एउटा बिन्दुमा पुगेर चुक्नुको कारण पनि यही नै हो ।
तपाईं स्क्रिप्टको खोजीमा भन्दा पनि अभिनयमा बढी व्यस्त भएकाले निर्देशन पछि धकेलिएको हो कि !
एक मनले सोच्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ । मैले अभिनयमा समय दिएर निर्देशनलाई कम समय दिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । जसरी मैले अहिले अरुका दुइटा चलचित्र गर्छु भनेर भनेँ त्यो समयमा मैले मेरो चलचित्रबारे केही गर्नै पाउँदिन । यो कुरालाई हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर मैले अभिनयलाई प्राथमिकता दिएर निर्देशनलाई छायाँमा राखेको भन्ने हुँदैहोइन । बनाउने कुरामा पनि उत्तिकै सोचिराखेको हुन्छु । सानो सानो कुराहरु केही न केही मेरै लागि गरिरहेको हुन्छु ।
अरु बर्सेनि चलचित्र निर्देशन गरिरहेका छन्, तर तपाईं भने कथा कथा भन्दै अल्झिरहनु भएको छ, आत्मविश्वासको खडेरी हो कि आलोचकको डर ?
कथाभन्दा पनि पटकथामा अल्झिएको छु । आत्मविश्वासको खडेरी नै परेको छैन नि भन्छु । तर अवेर चाहिँ छु । आलोचना हुन्छ नै । राम्रो बनाउन नसके थेग्नै नसक्ने आलोचना हुन्छ । आफैंलाई गाह्रो हुने आलोचना हुन्छ । कम्तिमा ठिक्कको मात्रै बनाउन सकियो भने आलोचनासँगै सकारात्मक आलोचना पनि आउँछ । म आफैंले आफैंलाई तयार नगरी कसरी चलचित्र बनाउने ? बनाउनैका लागि त बर्सेनि चलचित्र बनाउन सकिन्छ । तर मैले दिएको मापदण्डभित्र म पुग्न सक्छु कि सक्तिन ।
मलाई अब एभरेज फिल्म गर्नु छैन । एभरेज फिल्म वर्षमा हैन स्क्रिप्ट आइसकेपछि त्यसलाई छ महिनामै आफ्नो तरिकाले फिल्ममा ढाल्न सक्छु । तर त्यो गरेर मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? हुँदैन । पहिलो चलचित्रले जुन नाम दियो । त्यो नाम धमिल्याउँदै जाने काम मात्रै हुन्छ । मैले ल्याएको चिज अरुलाई फरक लागोस् या न लागोस् कम्तिमा मलाई चाहिँ फरक लाग्नुपर्छ । त्यति विश्वास गरेर मैले काम गरेँ भने त्यो इफोर्ट काममा देखिन्छ कि । यसकै लागि हो मैले ढिलो गरेको । मैले सोचेको छु मेरो बारेमा । म धेरै चलचित्र निर्देशन गर्ने निर्देशक बन्न नसकुँला । तर थोरै चलचित्र निर्देशन गरेर ती थोरै चलचित्रबाटै चिनिन चाहन्छु ।
तपाईं नेपाली चलचित्रमा मौलिक कथा र प्रस्तुति भित्र्याउने निर्देशकमध्येको एक, तर पछिल्लो समय विषयभन्दा बजारमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने टिप्पणी छ नि !
बनाएकै जम्मा तीनवटा छ । दुइटा बजारलाई ध्यान दिएर बनाएकै होइन । तेस्रो चाहिँ बजारलाई मात्रै ध्यान दिएको । त्यसको रिजल्ट देखिहाल्यो । ती कुराहरुले मलाई सिकाइरहेको छ । अहिलेको समयमा एक हदसम्म बजारमुखी हुनुपर्छ । हामी संघर्षको समयमा बजार नहेरी चलचित्र बनाउँथ्यौं । अबमेनस्ट्रिममा हामी नै लिडिङ गरिरहेको अवस्थामा बजार पनि सँगै जोडिएर आउँछ । त्यसबारे पनि अब सोच्नुपर्छ । पहिला ‘लुट’ बनाउँदा ५२ लाखमा बनाइयो भने अहिले त्यही चलचित्र बनाउन १ करोड ५२ लाख लाग्छ । रिकभरीको प्रोसेस पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।
एउटा बिन्दुमा पुगेर त्यसमा अडिरहन साह्रै गाह्रो भयो है ?
गाह्रो त छ । हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताको सफल निर्देशक पनि हेर्छु म । उहाँहरु कसरी राइज हुनुभयो । राइज हुँदैहुँदै जाँदा उहाँहरुको डाउनफल पनि आयो । किन आयो भन्दा सम्भवतः समयलाई बुझेर चलचित्र बनाउनु पर्छ । त्यही समयको चलचित्र बनाउनु पर्दैन । बुझेर बनाउनु पर्छ । नयाँ आउने मेकरहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । किन भने हामी नयाँ भन्दाभन्दै पुरानो थोत्रो हुन लागिसक्यौं । म पनि त्यही क्याटागोरीमा हुन्छ, त्यसैले कमजोर चलचित्र बनाउँदै डाउनफल नहौं भन्ने लाग्छ । गाह्रो छ, समय लिन्छु । तर समय नै नलाग्नै त हैन नि!
अब त तपाईं निर्देशक मात्रै रहनु भएन, अभिनेताको पनि छवि बनाइसक्नु भयो, फिल्म नपढेको निर्देशक र फिल्म पढेको निर्देशकसँग काम गर्दा के फरक हुन्छ ? फिल्म बनाउन फिल्म पढ्नैपर्छ ?
चलचित्र क्रिएटिभ क्षेत्र हो । यस्तो सोच मान्छेमा जु सुकै बेला पनि आउन सक्छ । कोही मान्छे कवि नहुनसक्छ । तर कुनै बेला अचानक मनमा आएको भावना उतार्दा ऊ राम्रो कवि पनि बन्न सक्छ । फिल्म पनि क्राफ्ट हो । यसमा प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञान भयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । तर भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ ।
आलोचक र समीक्षकहरु बीचको शीत युद्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चलचित्र उद्योग फस्टाउन समालोचकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ?
राम्रो लेखिँदा त्यही समीक्षकको हेडलाइनलाई कोट गरेर पब्लिसिटी गरिन्छ । फिल्म मेकरलाई म्याटर कति गर्छ भन्ने कुरा यसबाटै थाहा हुन्छ । खेदो खनेका समीक्षा पनि आउँछन् । बुझेर लेख्न पाइन्छ । चलचित्र बुझेर समीक्षा लेख्दा पनि मेकरहरुले समीक्षकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । यो एकअर्कासँग जोडिएर जाने चिज हो । सबैका लागि गरेको कामको प्रतिक्रिया आउँछ । साधारण मान्छेले गर्दा माध्यमको अभावले त्यो सुनिँदैन र याद हुँदैन समीक्षा आम मान्छेमा जाने भएकाले यसले अर्थ राख्छ ।
के नेपाली समालोचना पनि नेपाली फिल्म उद्योग झैं ‘कमजोर’ छ ?
हो । केही फिल्म मेकरहरु पनि कमजोर छैनन् । र केही समीक्षकहरु पनि कमजोर छैनन् । राम्रा समीक्षक पनि छन् ।
पत्रकारिता गरेको छ भन्दैमा उसले समीक्षा लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन ? समीक्षा बन्ने आधार केके हो । त्यो कुरा सायद चाहिन्छ होला । चलचित्रको ज्ञान भएका मान्छेहरुबाट त त्यस्तो समीक्षा नआउला । किन भने उहाँहरुले राम्रो कुराको बयान पनि गर्नुहुन्छ । नराम्रो चिजको खेदो पनि खन्नुहुन्छ । त्यसको सबैले स्वागत नै गर्नुपर्छ ।
तर कति यस्तो समीक्षक पनि हुनुहुन्छ, फिल्ममा के छ त्यसको समीक्षा होइन फिल्म बनाउने मान्छेको समीक्षा गरिन्छ । बनाउने मान्छेले बनाएका अघिल्ला चलचित्रसँग जोडिन्छ । दर्शकलाई यस्तो लाग्न सक्छ, दर्शकले के सोचेर हेर्ने भनेर लेख्छन् । वास्तवमा समीक्षकले भनेको दर्शक को हो ? हरेक व्यक्तिको आआफ्नै एनलाइसिस हुन्छ । समीक्षकले यो कुरा चाहिँ दर्शकलाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने उहाँ को हो ?उहाँले त आफ्नो कुरा पो लेख्ने हो त । समीक्षकलाई मन नपरेको दर्शकलाई मन पनि पर्न सक्छ नि ।
फिल्म मेकरहरुले पैसा तिराएर समीक्षा लेखाउँछन् रे नि हो ?
मैलै चाहिँ लेखाएको छैन । अरुले लेखाएको पनि देखेको छैन । तर पढ्दा त्यो लाग्छ किनभने त्यो चलचित्र हामीले पनि हेरेका हुन्छौं । लेखिए बराबरको फिल्म नदेख्दा हो कि जस्तो अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ ।
अभिनय क्षमताका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा स्वस्तिमा (खड्का) जी कि तपाईं अब्बल कलाकार ?
स्वस्तिमा धेरै अगाडि । हि…हि…हि… (लामो हाँसो ।)
स्वस्तिमा (खड्का)जीलाई ‘बुलबुल’ले ठूलो हाइट दियो । त्यसको स्क्रिप्ट तपाईंको हातमा आइपुग्दा यो स्क्रिप्टमा म स्वस्तिमालाई कतै देख्दिन भन्नुभएको थियो रे ! अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?
मलाई गाह्रो हुन्छ । मैले स्वस्तिमालाई मेरी श्रीमती भन्दा अगाडि हिरोइनका रुपमा मात्रै देखिरहेको थिएँ । अभिनेत्रीको रुमा कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ । सायद उनले त्यस्तै चलचित्रमा मात्रै काम गरिरहेकी थिइन् । उमेरले पनि म उसलाई सधैँ सानै देखिरहेको हुन्छु । त्यो स्क्रिप्ट हेर्दा त्यहाँ परिपक्व चरित्र थियो । त्यो सुरुमा हामी दुई जनाले गर्ने अफर आएको थियो । आयो तर मैले त्यो फिल्म गर्न नसकेको हो।
किन गरिनछु ‘बुलबुल’ भन्ने अहिले पश्चाताप लाग्छ ?
पश्चताप त लाग्दैन । तर विनोद (पौडेल) सरले एक्टरका रुपमा मलाई धेरै कुरा सिकाउनु हुन्थ्यो होला, त्यो अवसर पाउँथे भन्ने लाग्छ । तर मलाई डर के थियो भने म त्यसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै त्यो चलचित्रको बजेट बढेर जान्थ्यो । त्यो बजेट उठाइएन भने त्यो फिल्म काम लाग्दैन मेरा लागि । म अरुको फाइनान्सियल बोझ आफ्नो टाउकोमा बोकेर अरुलाई घाटा लगाउन सक्तिन ।
नैतिकरुपमा नै मलाई अफ्ठ्यारो अनुभूत हुन्छ । आफूले आफूलाई सम्झाउन नै गाह्रो हुन्छ । कस्तो देखिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो । स्वस्तिमा मेरो श्रीमती नभएर अरु नै कोही भइदिएको भए मेरो कल्पना शक्तिले काम गथ्र्यो होला । तर उसले यसरी गर्न सक्छ कि सक्तैन, गर्यो भने कस्तो होला भन्नेमा नै शंका थियो । म भन्थेँ, “कस्तो देखिन्छौ होला । (हि…हि…हि… ।) तर यस्तो भएर आयो चलचित्रमा मलाई लाग्यो उनी जस्तो सुकै क्यारेक्टर पनि गर्न सक्छिन् ।
यसको अर्थ म पनि अभिनयमा अझ धेरै सिक्न पाउने रहेछु भन्ने लोभ चाहिँ लाग्दोरहेछ ?
सिक्न पाउँथे कि भन्ने त लाग्छ । तर मैले अभिनय सिक्ने चक्करमा अरुको चलचित्र बिग्रियो भने त्यो जस्तो आत्मग्लानी मलाई कहिल्यै पनि हुने थिएन होला ।
नेपाली चलचित्रका कमजोरी के हुन्, ताकी समीक्षकले सधैँ आलोचना गर्छन्, र पहिलो रोजाई हिन्दी चलचित्र नै हुन्छन् ?
पछिल्लो समय हेर्न हो भने सबैभन्दा धेरै कमाउने चलचित्र नै नेपाली चलचित्र छन् । तर नियमित हेर्ने हिन्दी चलचित्र नै हो अहिले पनि । किन भन्दा हिन्दी चलचित्रले स्टारडम दिएको छ हामीलाई । त्यहाँ स्क्रिप्टमा विविधता आउन थालिसक्यो । जस्तोसुकै स्क्रिप्टलाई पनि मनोरञ्जनात्मक बनाएर चलचित्र बनाउन थालियो । तर हामी अहिले पनि फर्मुलामै काम गरिरहेका छौं ।
चाहे त्यो नयाँ फर्मुला नै किन नहोस् । जसरी पनि हसाउँने चक्करमा छौं, चाहे त्यो जुनसुकै जानराको चलचित्र होस् ।स्क्रिप्टले मागेर डार्क ह्युमरको रुप दिएको हो कि बजारले मागेर दिएको भन्नेमा हामी फिल्म मेकर पनि कन्फ्युज छौं होला ।
‘घामड शेरे’ले तपाईंलाई पैसा बाहेक के दियो ?
‘घामड शेरे’ले अभिनेताका रुपमा आफूले आफूलाई चिन्नका रुपमा अर्को खुड्किला थपिदिएको छ । म एक्टरको रुपमा पनि ग्रो गर्न सक्छु भन्ने पछिल्लो दुई तीनवटा चलचित्र गर्दा थाहा पाएको हुँ । गर्नु नै छ भने काम चलाउका लागि किन गर्ने ? आउँदैन भने कहिलेसम्म यो काम गरिरहने ? उहाँले खेलाउनु भयो मैले खेल्दिएँ भनेर कैलेसम्म काम गर्ने ? ‘घामड शेरे’ले म भित्र रहेको अभिनयलाई तिखार्न सहयोग गर्यो । मलाई योभन्दा अगाडि अलिकति लाज थियो होला तर यो चलचित्रबाट मैले त्यो त्यागेँ ।
यसमा क्यारेक्टरलाई बोक्ने प्रयास गरेको थिएँ । निश्चल बस्नेत क्यारेक्टरमा नदेखियोस् भन्ने प्रयास गरेको छु । सुरुदेखि नै शेरे देखियोस् भनेर मेहनत गरेको छु । यो चलचित्रमा म सफल भएँ भनेँ मैले नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेर अभिनयको क्षेत्रमा केही योगदान दिन सक्ने रहेछु भन्ने लाग्ने छ । मलाई बेलाबेला आत्मग्लानी पनि हुन्छ मैले गरेको रोलमा अरु कोही भएको भए यसले मैलेभन्दा राम्रो पो गर्नेथियो कि । कतै मैले यो काम गर्नाले अर्को व्यक्ति अवसरबाट बञ्चित पो भयो कि । मैलेभन्दा उसले काम गर्दा चलचित्र नै राम्रो पो बन्ने थियो कि भन्ने सोच्छु ।
त्यो शंका यसबाट हट्यो ?
यो चलचित्रमा आइपुग्दा यसमा नराम्रो काम गरेको छु भन्ने फिल भएको छैन ।
काठमाण्डौ । यतिबेला सोशल मिडियामा जताततै भाइरल बनिरहेका सचिन परियार यतिबेला कृष्ण कंडेलको इन्द्रेणी कार्यक्रममा पुगेर आफ्नो प्रतिभा देखाई रहेका छन् । सचिन परियार ती बालक हुन् जस्ले टिकटकमा आफ्नो मासुम अनुहारलाई कहिले रुवाउँदै त कहिले हसाउँदै गीत गाएर सबैको मन जीतेका छन् । गाउँमा बसेर लोकगीत गाउने सचिनको सपना कुनै दिन कृष्ण कंडेलको कार्यक्रम […]
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको सम्बन्ध विच्छेदको चर्चा भइरहेको छ । उनले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा संकटमा परेको खबर भाइरल भएपछि मिडियासँग आक्रोस पोखेकी छन् । डिर्भोर्सको समाचारमा आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै व्यक्तिगत विषयलाइ समाचार बनाएको उनको आरोप छ । उषा खड्गी र जीपी तिमल्सिनाको जोडीलाइ उदाहरणीय जोडीको रुपमा लिने गरिएको थियो […]